UN-HABITAT | Installing hand-washing stations in Yangon’s informal settlements and Rakhine benefits the most vulnerable communities
UN-HABITAT > News > Installing hand-washing stations in Yangon’s informal settlements and Rakhine benefits the most vulnerable communities
Installing hand-washing stations in Yangon’s informal settlements and Rakhine benefits the most vulnerable communities
Since the first wave of COVID-19 outbreak in Myanmar, UN-Habitat has been providing COVID-19 preventive measures to the communities in Rakhine and Yangon’s Informal Settlements, such as Personal Protective Equipment (PPE), soaps, hand sanitizers, and COVID-19 awareness IEC materials.
As of now, over 1,000 hand-washing stations have been installed in 8 townships of informal settlements in Yangon and Rakhine as part of the COVID-19 response activities, benefiting over 170,000 people. These activities were carried out in collaboration with community volunteers under the technical supervision of UN-Habitat staff in Myanmar in order to improve hygiene practices and prevent the spread of COVID-19.
“I collaborated with UN-Habitat to buildapublic handwashing station,” said Daw Yi Yi Thein, the owner ofaShwe Nadi coffee shop. “I ask my customers to wash their hands before entering my shop. My employees are also reminded to practice regular handwashing. While waiting for their orders, the majority of my customers read the key messages about proper handwashing that were posted on the handwashing station.”
“My customers will be able to pass these messages on to their friends and family,” she stated confidently.
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားမ၀င် အခြေချနေထိုင်သူများ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မှ ထိခိုက်လွယ်သော ရပ်ရွာလူထု သည် လက်ဆေးကန်များ တပ်ဆင်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွါးမှု ပထမလှိုင်းမှ စတင်၍ UN-Habitat သည် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်ရှိ တရားမဝင် အခြေချနေထိုင်ရာ နေရာများမှ ရပ်ရွာလူထုအတွက် COVID-19 တစ်ကိုယ်ရေ အကာအကွယ် ပစ္စည်း (PPE)၊ ဆပ်ပြာ၊ လက်သန့်ဆေးရည်များနှင့် COVID-19 အသိပညာပေး စာစောင်များ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်ရှိ တရားမဝင် အခြေချနေထိုင်ရာနေရာ မြို့နယ် (၈) ခု တွင် လက်ဆေးကန် (၁,၀၀၀) ကျော် တပ်ဆင်ခဲ့ပြီး လူပေါင်း (၁၇၀,၀၀၀) ကျော် အတွက် အကျိုးပြုခဲ့ပါသည်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အလေ့အကျင့်များ ရရှိရန်နှင့် COVID-19 ပြန့်ပွါးမှုမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် လက်ဆေးကန် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ UN-Habitat ဝန်ထမ်းများ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ ရပ်ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
“အများပြည်သူလက်ဆေးကန် တပ်ဆင်ဖို့ UN-Habitat နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ရွှေနဒီ ကော်ဖီဆိုင် ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူ ဒေါ်ရီရီသိန်း က ပြောပါတယ်။ “ကျွန်မရဲ့ ဆိုင်ကို လာတဲ့ ဝယ်သူတွေကို ဆိုင်ထဲမဝင်ခင် လက်ဆေးဖို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ပုံမှန်လက်ဆေးဖို့ အမြဲ သတိပေးပါတယ်။ ကျွန်မဆိုင်မှာ ဝယ်သူအများစုက သူတို့မှာထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စောင့်ရင်း လက်ဆေးကန်မှာ ကပ်ထားတဲ့ လက်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေး ပိုစတာကို ဖတ်ကြပါတယ်။”
“ကျွန်မဆိုင်ကိုလာတဲ့ ဝယ်သူတွေက ဒီလက်ဆေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေး အကြောင်းအရာတွေကို သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေ ကို ပြန်ပြောကြမှာပါ” လို့ သူမက ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။